तपाईंको राशिफल, भाद्र २ गते मंगलबार - Rastriya Samachar
तपाईंको राशिफल, भाद्र २ गते मंगलबार
मङ्गलवार, ३ भाद्र २०७६ ७:०४
व्यापार व्यावसाय अन्य दिन भन्दा खस्केर जानेछ भने भनेजस्तो आम्दानीनहुँदा दैनिकि प्रभावित हुनेछ । सरकारि स्रोत साधन तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला समय मध्ययम रहेकोछ । पढाइ लेखाइमा ध्यान नजादा अरु भन्दा पछि परिने सम्भावन रहेकोछ । माया प्रेममा अबिस्वास बढ्नेछ भने घर परिवारमा आफन्तबिच घरायसि कुरामा विवाद सिर्जना हुनसक्छ ध्यान दिनुहोला । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउँन सक्छ ख्याल गर्नुहोला ।
नयाँ काम पाउने तथा नोकरिमा सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको अधिक सम्भावना रहेकोछ । राजनीति तथा समाजसेवीहरुले राज्यबाट लाभ पाउने समय रहेकोछ भने व्यापारमा समय लगानी गर्नेहरुले मनग्गे धन कमाउन सक्नेछन् । बवा तथा बुवा सरहका मानिसबाट तपार्ईँको काममा सहयोग हुनेछ भने आफन्त तथा सहयोगिहरुले तपार्ईँकै साथ दिनेछन् । माया प्रेमको बन्धन कसिने तथा पढाइ लेखाइमा उत्कृष्ट नतिजाको साथ पुरस्कार जित्न सकिनेछ ।
लामोदुरिको व्यावसायिक यात्रा हुने प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । शैक्षिक तथा धार्मिक यात्राको हुनेछ भने बिद्या तथा प्रतिष्पर्धामा अरुभन्दा अग्र स्थानमा तपार्ईँको नाम आउनेछ । भाग्य तथा समयले साथ दिने हुनाले सबै प्रकारका कामहरुमा लाभ मिल्ने समय रहेकोछ । माया प्रेमको गाठो कसिनेछ भने जीवन साथिको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिने समय रहेकोछ । पैत्रिक धन तथा सम्पति हात लागी हुने योग रहेकोछ ।
कामगर्दा ख्याल गर्नुहोला शुरु गरेका कामहरु बिग्रने तथा आर्थिक भार पर्नेछ । व्यापारमा लगानी गरेपनि आम्दानी नहुने हुनाले दैनिक गुजार ऋणलिएर चलाउनु पर्ने बाध्यता आउनेछ । प्रणय सम्बन्धमा चिसोपनको सुरुवात हुनेछ भने जीवन साथिको सहयोग नपाउदा कामहरु थाति रहनेछन् । पढाइ लेखाइ अथुरै रहनेछ भने नतिजा अरुतिर जानेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला अप्रिर्य घट्ना घट्न सक्छ ।
आफ्नो क्षमता प्रयोग गरि अरुको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ भने मान सम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ । मानव निर्मित भौतिक सम्पतिको प्रयोग गर्न पाइने तथा विलासी जीवन व्यातित गरि रमाउने समय रहेकोछ । जीवन साथिसँग रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने एकल तथा साझेदारि व्यावसायबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
सत्रु तथा प्रतिष्पर्धिहरु आईलाग्ने भएपनि अन्तत तपार्ईँको क्षमता देखेर आफै साईड लाग्नेछन् । स्वास्थ्य सम्बन्धि पुराना समस्याहरु ठिक हुँदै जाने तथा काम गर्न सहज बाताबरण बन्नेछ । पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धिहरुलार्ई किनारा लगाउँदै अगाडि बढ्ने समय रहेकोछ । पुराना ऋणहरु सकाउँदै नयाँ कामको थालनी गर्न सकिनेछ । नोकरिमा प्रवेशको सम्भावनालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । प्रेम प्रशङगमा एक अर्काबिच नजिक हुने तथा रमाउँन सकिनेछ ।
बौद्धिक कार्यमा सहभागि भई आफ्नो गतिलो प्रश्तुति पस्कने अवसर प्राप्त हुनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जानेछ भने नतिजा आफैतिर ल्याउँन सकिनेछ । परिवार तथा सन्तानबाट तपार्ईँले गरेको काममा सहयोग हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी बडाउँदा राम्रो कमाई हुनेछ । माया प्रेममा बिश्वासको बाताबरण बढेर जानेछ भने भौतिक धन सम्पति लाभ हुनेसमय रहेकोछ ।
कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने अरु व्यावसायमा नाँफा कमाउन निकैनै संघर्ष गर्नुपर्नेछ । सवारि साधन तथा घर जग्गाको कारोबारबाट केहि मात्रमा लाभ लिन सकिनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा सफलता पाउँन बढिनै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । आमा तथा आमासरहका मानिससँग मनमुटाब बढ्नेछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले पिरोल्नेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको खासै समर्थन प्राप्त हुनेछैन ।
आफन्त तथा शुभचिन्तकहरुको सहयोग तथा समर्थन पाईन ग्रहयोग रहेकोछ । दाजुभाईहरु सँगको सम्बन्धमा नया पनको बिकास हुनेछ । छोटो दुरिको व्यावसायिक यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने पराक्रम बढेर जाने हुनाले शाहशिलो काम गर्ने आट आउनेछ । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने दाम्पत्य जीवन सुखि रहनेछ ।
व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने होटल तथा रेष्टुरामा लगानी गरि मनग्गे आम्दानीगर्न सकिनेछ । आत्मिय मित्र तथा साभिभाईहरुको सहयोगले सकारात्मक कामहरु गर्न सकिनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा मन जाने हुनाले नतिजा आफैतिर ल्याउँन सकिनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जाने तथा पतिपत्निबित बिश्वासको बाताबरण बढ्नेछ । बोलिको प्रभाव बढ्ने हुनाले बोलेरै मनग्गे आम्दानीगर्न सकिनेछ ।
राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन पाइने हुँदा नाम कमाउन तथा पद प्राप्तीको योग रहेकोछ । बिभिन्न बिलाशी बस्तुको प्रयोग गरि मनग्गे आम्दानी हुनेछ । आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने चालिएका कदमहरुबाट भनेजस्तो नतिजा आउने हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ । माया प्रेममा एकअर्कालाई विश्वास गर्ने बाताबरण बन्नेछ । पढाइ लेखाइमा मनजाने हुनाले नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ ।
अर्थतन्त्रकाे रक्षा र रोग तथा भोकबाट जोगाउने प्रमुख दायित्व : प्रधानमन्त्री
नेपालमा संक्रमितको संख्या ६८२ पुग्यो,थप ६ जनामा संक्रमण पुष्टि
कोरोनाका कारण विश्वभर ३ लाख ४६ हजारको मृत्यु, सङ्क्रमितको संख्या ५५ लाख भन्दा बढी
प्रिमियर लिगका दुई खेलाडीमा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि
कोरोना अपडेटः विश्वभर संक्रमित ५२ लाख नाघ्यो, ३ लाख ३९ हजारको मृत्यु
नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउन सकेन,विगतको निरन्तरता भयो: नेता लिङ्देन
मेलम्चीको सुरुङको अन्तिम विन्दु सुन्दरीजलमा काम जारी
कोरोना रोकथाम कोषमा राप्रपा प्रदेश सांसदले दिए १५ दिनको तलब
कोरोनाले मुुलुकको अर्थतन्त्र ढल्न दिनुहुन्न : राप्रपा अध्यक्ष डा. लोहनी
आज आमाको मुख हेर्ने पर्व, आमाप्रति श्रद्धाअर्पण गरी आशिर्वाद लिइँदै
कमल थापाको प्रश्न, सयौं कि.मि. हिडेर घर फर्किरहेकाप्रति सरकारको जिम्मेवारी छैन?
लकडाउनमा पनि पशुपति मन्दिरको सफाइ जारी
अतिक्रमणमा परेकाे कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा तैनाथ हुने सेनाकाे तयारी
झापाको कचनकवलमा संक्रमित देखिएपछि सांसद लिङ्देनको अपिल : “नआत्तिनुस्”
राप्रपा बुटवलद्वारा लिम्पियाधुरा-लिपुलेक अतिक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन
निःशुल्क पाउने सेनिटाइजर बिक्री गरेपछि औषधि पसल बन्द
कम्युनिष्टको एजेण्डा बोक्ने कांग्रेसले कम्युनिष्ट प्रभाव र लुटतन्त्र पराजित गर्न नसक्ने
राष्ट्रियताको कुरा गर्न सजिलो हुन्छ, राष्ट्रवादी भएर बाच्न गाह्रो हुन्छ: कमल थापा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, राजसंस्था र स्थानीय स्वायतत्ताबारे बहस गरौं: थापा
संकटको बेलामा नेकपा आन्तरिक सत्ता र शक्ति संघर्षमा अलमलिनु दुर्भाग्यपूर्ण:राप्रपा
सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरु संविधानको भावना विपरित: राप्रपा
आज प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर शिवचोकका ७ घर सिल
उद्धार गरिएकी सुत्केरीको थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा मृत्यु
पहिलो महिला न्यायाधीश सिलु सिंहको निधन
लिपुलेक पुग्ने सडक बनाउन सेना खटियो
लिपुकेक-लिम्पियाधुरा: नेता, जनता र राजा
मधेसी समुदायलाई अपमानित गर्ने शब्दको प्रयोग हुनु र प्रशारण गरिनु खेदजनक छ: बोहरा
थप ७२ जनामा काेराेना सङ्क्रमण पुष्टि, कुल ६७५ पुग्यो
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो
भरतपुर अस्पतालमा एकजनाको मृत्यु, पीसीआर परीक्षण गरिँदै